ဒီနေ့ ဖျာပုံဆေးရုံက ဆရာဝန် ၃ ယောက် ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့် သေတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရင်း ရင်ထဲ တင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ခံစားမိရတယ် (အမည် မဖော်တတ်သော ဝေဒနာ) - CeleLove
June 12, 2019 Cele Love ဘ၀နှင့်ပညာပေး 0
ဒီနေ့ ဖျာပုံဆေးရုံက ဆရာဝန် ၃ယောက် ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့် သေတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရင်း ရင်ထဲ တင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ခံစားမိရတယ် ။ ဆရာဝန်လောကဆိုတော့ ကိုယ့်ချင်းထဲက မပါပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းခဲ့ပေမယ့် မပြည့်ခဲ့ပါဘူး ။ သေတဲ့ ၃ယောက်မှာ ၂ယောက်က ဆေး ၂ က ၊ တစ်ယောက်က ဆေး ၁ က ။ ထုံစံအတိုင်း သူတို့ wall တွေကို ဝင်ကြည့်မိတယ် ။ ဆေး ၂ က ၂ယောက်မှာ တစ်ယောက်က same batch ။ ဝေယံမျိုးထက် ဆိုတဲ့ တစ်ယောက် ။ ငယ်ငယ်ထဲက သူငယ်တန်းထဲက ကျောင်းတူတူတက်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ။ ဆယ်တန်းအောင်တော့လည်း အထက ၁ သင်္ဃန်းကျွန်းကနေ တူတူ အောင်ခဲ့ကြတာ ။ အသားညိုညို ၊ အရပ် အနေတော် ၊ လူကောင် ညှက်ညှက် ။ အမြဲတမ်း ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ။ ကိုယ့်ကိုလည်း နာမည်ပြောင်နဲ့ စတတ်တယ် ။ ဘောလုံးလည်း ကန်တယ် ။ စိတ်ထားလည်း ကောင်းတဲ့ကောင် ပါ …. ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် က MSc ဝင်ခွင့် ဖြေတုန်းကတောင် သူနဲ့ ဆုံခဲ့သေးတယ် ။ မှတ်မှတ်ထင်ထင် စကားတွေတောင် အများကြီး ပြောခဲ့ကြသေးတာ ။ အစက သေတဲ့သူအမည်ထဲမှာ သူ့နာမည်ကို ဖတ်မိတော့ နာမည်တူတာလောက်ပဲ ထင်နေတာ ။ နောက်တော့မှ သူ့ ဝေါလ်မှာ RIP တွေ တွေ့တော့မှ သေချာသွားခဲ့တာ ။ သူ့ ပရိုဖိုင် ပုံက လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ထဲက တင်ထားတဲ့ပုံလေး ။ Cover photo ကျတော့ စေတီတစ်ဆူ တည်နည်း အကြောင်း ပုံ ။ အော် မသေခင်ညကတော့ သူလည်း ဖေ့ဘုတ် ထိုင်ကြည့်ခဲ့မှာပဲ ။ အခု ကျွန်တော်တို့ New feed ပွတ်သလို သူလည်း ထိုင်ပွတ်ခဲ့မှာပဲ လေ …. ။
တွေးကြည့်လိုက်တော့ သေခြင်းတရားကို ကျွန်တော် တော်တော်လေး တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့တောင် မသိလိုက်ဘဲ သေခြင်းတရားက ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာ စောင့်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နောင်ဘဝကျရင်လည်း အခုလိုပဲ အပြုံးချိုချိုနဲ့ မွေးဖွားလာပါဦး သူငယ်ချင်း ။ ဆရာဝန်အဖြစ်နဲ့ လူနာတွေကို ကုသဖို့ လူ့လောကကို ပြန်လာခဲ့ပါဦး ။ အခုတော့ ခဏတာ အိပ်စက်ပါဦးတော့ ။ ညဘက် ဂျူတီတွေ မရှိတဲ့အရပ် ၊ ဆရာဝန်တွေကို ဆဲဆိုရိုင်းပြသူတွေ မရှိတဲ့ အရပ် ၊ ဆူပူကြိမ်းမောင်းတတ်တဲ့ အကြီးတွေ မရှိတဲ့အရပ် ၊ လစာ နည်းတာကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုတဲ့အရပ် ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ မရှိတဲ့အရပ်၊ အဲ့လိုမျိုးအရပ်မျိုးမှာ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်စက်လိုက်ပါဦး နော် …. ။ နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပန်ဂျာထွယ် ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ ဆေး ၁ က မို့လို့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး ။ ပိန်ပိန်ပါးပါး လှလှပပ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပါပဲ ။ ဗန်းမော်က ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးလို့ သိရပါတယ် ။ သူ့ facebook Cover photo ကိုကြည့်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ထဲက တင်ခဲ့တာပါ ။ သူ့သူငယ်ချင်း သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ သူဟာ ထာဝရ ရှင်သန်နေမှာပါ …. ။
သူ့ ဝေါလ်မှာ မနှစ်က birthday wish လုပ်ထားတာ ကြည့်တော့ ဇူလိုင် ၁၉ တဲ့ ။ နှစ်တွေ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့် သူ့ဝေါလ်က birthday wishလေးတွေ အကြောင်း တွေးမိတော့လည်း ရင်ထဲ ဟာတာတာကြီး ခံစားရမိပါတယ် ။ နောင်ဘဝတွေမှာ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးတွေ ဝေးပါစေ ။ ဆရာဝန်အလုပ်က ကုသိုလ်ရတဲ့ အလုပ်မို့ ဒီကုသိုလ်တွေက သူ့ရဲ့ တမလွန်ဘဝအတွက် လုံလောက်နေမှာပါ ။ လူ့အသက်တွေကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် လူ့ဘဝကို တစ်ကျော့ပြန် လာခဲ့ပါဦး ဒေါက်တာရေ ။
နောက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူ ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂျူနီယာတန်းကပါ ။ သူ့ချစ်သူက ကျွန်တော်တို့ same batch ထဲကပဲမို့ တခါတလေ စုံတွဲပုံလေးတွေ တွဲတင်ရင် တွေ့ဖူးတဲ့ ဂျူနီယာလေးပါ ။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ဝေါလ် ဝင်ကြည့်ဖြစ်တော့ သူ့ကောင်လေးကို စထား နောက်ထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ချို့ တွေ့ရတယ် ။ Cover photo က နေဝင်ချိန် မြစ်ကမ်းနံဘေးမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေး ။ အဲ့အချိန်ကတော့ သူ့ဘဝ နေဝင်ချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်မှန်း သူ သိနိုင်ခဲ့ပါ့မလား ။ Profile ပုံကို ကြည့်တော့ နှင်းဆီပန်းစည်းကြီးကို ပွေ့ဖက် နမ်းရှိုက်လို့ ။ အဲ့ ပန်းစည်းက ချစ်သူများနေ့မှာ သူ့ချစ်သူ သူ့ကို ပေးခဲ့တဲ့ ပန်းစည်းကြီး ။
ချစ်သူများနေ့က ပို့စ်မှာ သူရေးခဲ့တာက ၃နှစ်တာ ရန်ဖြစ်ပြီးချိန်မှာ I received the very first ( and may be the last) boutique ဆိုပြီး ရေးခဲ့တာပါ ။ May be the last ကို သေသေချာချာ ကွင်းခတ် ရေးခဲ့တာကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲ နိမိတ်ဆိုတာကြီးကို မယုံဘူးလို့ ငြင်းနေခဲ့မိပါတယ် ။ ဒီနေ့ သူ့ချစ်သူ တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်ကလည်း ရင်နင့် စရာပါ ။ အချစ်ရယ် ဘုရားရှင် ရင်ခွင်ကို အရင်သွားပါတော့တဲ့ ။ ရှင်ကွဲမှာ ပြန်ဆုံဖို့ မျှော်လင့်ချက် ရှိသေးပေမယ့် သေကွဲမှာတော့ ပြန်ဆုံဖို့် မရှိတော့ပါဘူး ။ သေမင်းဟာ သူခေါ်သွားပြီးတဲ့ လူတွေကို ပြန်ပို့ရိုးထုံးစံ မရှိပါဘူး ။ သံသရာမှာ ထပ်ဆုံခဲ့ကြရင် ဒီလိုကံတရားမျိုး ဝေးပြီး ရိုးမြေကျ ပေါင်းဖက်ရသော ကံတရားမျိုးနဲ့သာ ဆုံစည်းနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတော့တယ် ။
ယနေ့ ကောင်းရာဘုံဘဝ ကူးပြောင်းသွားကြသော ဆရာဝန်များအား မိသားစုနှင့်အတူ ဝမ်းနည်းမိပါသည် ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူနိုင်ကြပါစေ ။
Souce : Derick Min Htet Naing
ဒီနေ့ ဖြာပုံဆေးရုံက ဆရာဝနျ ၃ ယောကျ ကားအကျစီးဒငျ့ကွောငျ့ သတေဲ့ သတငျးကို ဖတျရငျး ရငျထဲ တငျးကပျြကပျြကွီး ခံစားမိရတယျ (အမညျ မဖျောတတျသော ဝဒေနာ)
ဒီနေ့ ဖြာပုံဆေးရုံက ဆရာဝနျ ၃ယောကျ ကားအကျစီးဒငျ့ကွောငျ့ သတေဲ့ သတငျးကို ဖတျရငျး ရငျထဲ တငျးကပျြကပျြကွီး ခံစားမိရတယျ ။ ဆရာဝနျလောကဆိုတော့ ကိုယျ့ခငျြးထဲက မပါပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးခဲ့ပမေယျ့ မပွညျ့ခဲ့ပါဘူး ။ သတေဲ့ ၃ယောကျမှာ ၂ယောကျက ဆေး ၂ က ၊ တဈယောကျက ဆေး ၁ က ။ ထုံစံအတိုငျး သူတို့ wall တှကေို ဝငျကွညျ့မိတယျ ။ ဆေး ၂ က ၂ယောကျမှာ တဈယောကျက same batch ။ ဝယေံမြိုးထကျ ဆိုတဲ့ တဈယောကျ ။ ငယျငယျထဲက သူငယျတနျးထဲက ကြောငျးတူတူတကျခဲ့တဲ့ သူငယျခငျြး ။ ဆယျတနျးအောငျတော့လညျး အထက ၁ သင်ျဃနျးကြှနျးကနေ တူတူ အောငျခဲ့ကွတာ ။ အသားညိုညို ၊ အရပျ အနတေျော ၊ လူကောငျ ညှကျညှကျ ။ အမွဲတမျး ပွုံးပွုံး ပွုံးပွုံးနဲ့ ။ ကိုယျ့ကိုလညျး နာမညျပွောငျနဲ့ စတတျတယျ ။ ဘောလုံးလညျး ကနျတယျ ။ စိတျထားလညျး ကောငျးတဲ့ကောငျ ပါ …. ။
ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈ က MSc ဝငျခှငျ့ ဖွတေုနျးကတောငျ သူနဲ့ ဆုံခဲ့သေးတယျ ။ မှတျမှတျထငျထငျ စကားတှတေောငျ အမြားကွီး ပွောခဲ့ကွသေးတာ ။ အစက သတေဲ့သူအမညျထဲမှာ သူ့နာမညျကို ဖတျမိတော့ နာမညျတူတာလောကျပဲ ထငျနတော ။ နောကျတော့မှ သူ့ ဝေါလျမှာ RIP တှေ တှတေ့ော့မှ သခြောသှားခဲ့တာ ။ သူ့ ပရိုဖိုငျ ပုံက လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈထဲက တငျထားတဲ့ပုံလေး ။ Cover photo ကတြော့ စတေီတဈဆူ တညျနညျး အကွောငျး ပုံ ။ အျော မသခေငျညကတော့ သူလညျး ဖဘေု့တျ ထိုငျကွညျ့ခဲ့မှာပဲ ။ အခု ကြှနျတျောတို့ New feed ပှတျသလို သူလညျး ထိုငျပှတျခဲ့မှာပဲ လေ …. ။
တှေးကွညျ့လိုကျတော့ သခွေငျးတရားကို ကြှနျတျော တျောတျောလေး တုနျလှုပျသှားခဲ့ရပါတယျ ။ ကြှနျတျောတို့တောငျ မသိလိုကျဘဲ သခွေငျးတရားက ကြှနျတျောတို့ဘေးမှာ စောငျ့နတောမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ ။ နောငျဘဝကရြငျလညျး အခုလိုပဲ အပွုံးခြိုခြိုနဲ့ မှေးဖှားလာပါဦး သူငယျခငျြး ။ ဆရာဝနျအဖွဈနဲ့ လူနာတှကေို ကုသဖို့ လူ့လောကကို ပွနျလာခဲ့ပါဦး ။ အခုတော့ ခဏတာ အိပျစကျပါဦးတော့ ။ ညဘကျ ဂြူတီတှေ မရှိတဲ့အရပျ ၊ ဆရာဝနျတှကေို ဆဲဆိုရိုငျးပွသူတှေ မရှိတဲ့ အရပျ ၊ ဆူပူကွိမျးမောငျးတတျတဲ့ အကွီးတှေ မရှိတဲ့အရပျ ၊ လစာ နညျးတာကို ဂရုစိုကျစရာ မလိုတဲ့အရပျ ၊ စိတျဖိစီးမှုတှေ မရှိတဲ့အရပျ၊ အဲ့လိုမြိုးအရပျမြိုးမှာ အိပျရေးဝအောငျ အိပျစကျလိုကျပါဦး နျော …. ။ နောကျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ပနျဂြာထှယျ ဆိုတဲ့ တဈယောကျကတော့ ဆေး ၁ က မို့လို့ ကြှနျတျော မသိပါဘူး ။ ပိနျပိနျပါးပါး လှလှပပ မိနျးကလေး တဈယောကျပါပဲ ။ ဗနျးမျောက ကခငျြတိုငျးရငျးသူလေးလို့ သိရပါတယျ ။ သူ့ facebook Cover photo ကိုကွညျ့တော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ စုရိုကျထားတဲ့ပုံလေးပါ ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈထဲက တငျခဲ့တာပါ ။ သူ့သူငယျခငျြး သူ့မိသားစုဝငျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာတော့ သူဟာ ထာဝရ ရှငျသနျနမှောပါ …. ။
သူ့ ဝေါလျမှာ မနှဈက birthday wish လုပျထားတာ ကွညျ့တော့ ဇူလိုငျ ၁၉ တဲ့ ။ နှဈတှေ တဈနှဈပွီး တဈနှဈ ကွာလာတာနဲ့အမြှ ပြောကျကှယျသှားတော့မယျ့ သူ့ဝေါလျက birthday wishလေးတှေ အကွောငျး တှေးမိတော့လညျး ရငျထဲ ဟာတာတာကွီး ခံစားရမိပါတယျ ။ နောငျဘဝတှမှော ဒီလို အဖွဈဆိုးတှေ ဝေးပါစေ ။ ဆရာဝနျအလုပျက ကုသိုလျရတဲ့ အလုပျမို့ ဒီကုသိုလျတှကေ သူ့ရဲ့ တမလှနျဘဝအတှကျ လုံလောကျနမှောပါ ။ လူ့အသကျတှကေို ကယျတငျဖို့အတှကျ လူ့ဘဝကို တဈကြော့ပွနျ လာခဲ့ပါဦး ဒေါကျတာရေ ။
နောကျ ကောငျမလေး တဈယောကျဖွဈတဲ့ အေးမွတျသူ ဆိုတာကတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဂြူနီယာတနျးကပါ ။ သူ့ခဈြသူက ကြှနျတျောတို့ same batch ထဲကပဲမို့ တခါတလေ စုံတှဲပုံလေးတှေ တှဲတငျရငျ တှဖေူ့းတဲ့ ဂြူနီယာလေးပါ ။ ထုံးစံအတိုငျး သူ့ဝေါလျ ဝငျကွညျ့ဖွဈတော့ သူ့ကောငျလေးကို စထား နောကျထားတဲ့ ပို့ဈတဈခြို့ တှရေ့တယျ ။ Cover photo က နဝေငျခြိနျ မွဈကမျးနံဘေးမှာ ရိုကျထားတဲ့ပုံလေး ။ အဲ့အခြိနျကတော့ သူ့ဘဝ နဝေငျခြိနျဟာ ဘယျအခြိနျမှနျး သူ သိနိုငျခဲ့ပါ့မလား ။ Profile ပုံကို ကွညျ့တော့ နှငျးဆီပနျးစညျးကွီးကို ပှဖေ့ကျ နမျးရှိုကျလို့ ။ အဲ့ ပနျးစညျးက ခဈြသူမြားနမှေ့ာ သူ့ခဈြသူ သူ့ကို ပေးခဲ့တဲ့ ပနျးစညျးကွီး ။
ခဈြသူမြားနကေ့ ပို့ဈမှာ သူရေးခဲ့တာက ၃နှဈတာ ရနျဖွဈပွီးခြိနျမှာ I received the very first ( and may be the last) boutique ဆိုပွီး ရေးခဲ့တာပါ ။ May be the last ကို သသေခြောခြာ ကှငျးခတျ ရေးခဲ့တာကို ကွညျ့ရငျး စိတျထဲ နိမိတျဆိုတာကွီးကို မယုံဘူးလို့ ငွငျးနခေဲ့မိပါတယျ ။ ဒီနေ့ သူ့ခဈြသူ တငျလိုကျတဲ့ ပို့ဈကလညျး ရငျနငျ့ စရာပါ ။ အခဈြရယျ ဘုရားရှငျ ရငျခှငျကို အရငျသှားပါတော့တဲ့ ။ ရှငျကှဲမှာ ပွနျဆုံဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြ ရှိသေးပမေယျ့ သကှေဲမှာတော့ ပွနျဆုံဖိျု့ မရှိတော့ပါဘူး ။ သမေငျးဟာ သူချေါသှားပွီးတဲ့ လူတှကေို ပွနျပို့ရိုးထုံးစံ မရှိပါဘူး ။ သံသရာမှာ ထပျဆုံခဲ့ကွရငျ ဒီလိုကံတရားမြိုး ဝေးပွီး ရိုးမွကြေ ပေါငျးဖကျရသော ကံတရားမြိုးနဲ့သာ ဆုံစညျးနိုငျဖို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတော့တယျ ။
ယနေ့ ကောငျးရာဘုံဘဝ ကူးပွောငျးသှားကွသော ဆရာဝနျမြားအား မိသားစုနှငျ့အတူ ဝမျးနညျးမိပါသညျ ။ ငွိမျးခမျြးစှာ အနားယူနိုငျကွပါစေ ။